Kedu ngwá ọrụ ị nwere ike ịdọ aka ná ntị iji soro Amazon ahịa nke ndị asọmpi m?
Ịgụ asọmpi bụ akụkụ dị mkpa nke nchọpụta nke onye ọ bụla na-aga nke ọma na-elekọta na Amazon. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbaso ahịa Amazon nke ndị asọmpi gị, ebe a bụ obere akwụkwọ ntinye iji nyere gị aka. Ngwuregwu gị ọ bụ nke kachasị? Kedu ihe a ga-eme nke ọma? Ngwaahịa gị dị ka ndepụta gị? Nke a bụ ihe ndị kachasị mkpa ị ga - echebara anya - nyocha, nkwalite, na nhazi ndepụta. Ka anyị lee ha otu n'otu n'okpuru.
Ọ bụ onye na-enweghị atụ, mana nyocha bụ isi ihe bara uru nke onye nyocha mbụ. Ọ dịghị mkpa ịsị na ndị ahịa na-atụle otu ngwaahịa ahụ nwere ike ịnye gị otu obi gbasara ihe gbasara ya nwere ike ịme ka mma, ma ọ bụ nke ọzọ - marklogic new ceo. Na isi mkpịsị aka bụ na ndị ahịa ise ise na-enye otu ngwaahịa ahụ na-enwekarị ihe dịka narị mmadụ atọ nyocha ndị ahịa. Ma òkè ọdụm nke ọbụna ndị na-azụ ahịa zuru ezu na-abịakarị n'enweghị nzaghachi. Ntre, nso ke ẹkeme ndinam ye emi? Ana m akwado iji Ngwá Ọrụ Nzuzo free online. Ọ gaghị eziga gị ozi ọ bụla na nzaghachi ọ bụla ma ọ bụ nlezianya ndị ahịa maka ịnwe ngwa ngwa na nchịkọta dị mkpirikpi ma na-eme ka o kwe omume ịnweta email email, nke na-eje ozi dị ka ihe ncheta dị mma na-atụ aro ọ bụla na-adịbeghị anya na-azụ ahịa ka ọ kwụsịrị ikwu okwu maọbụ akaebe.
Mgbe ụfọdụ, ndị na-asọmpi kachasị mma nwere ike ịdaba na mberede, nnukwu ego nke iwu na-aga n'ihu site na nkwalite na-edozi ụzọ ziri ezi. Ma mgbe ị ghọtara na atụmatụ ndị pụrụ iche nke onye asọmpi ma ọ bụ naanị smart smart scheme na-arụ ọrụ - gịnị mere ị gaghị soro Amazon ahịa na nkwalite mgbalị nke onye mmegide iji jiri ya kasị ike n'akụkụ maka onwe gị uru? Nke a bụ mgbe Big Tracker na-arụ ọrụ n'ịntanetị. Site na ngwá ọrụ a na-enye aka, ị nwere ike ọ bụghị naanị soro ahịa ahịa Amazon, ọnụahịa ego nke ndị ahịa gị ahịa ma na-enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ data nkwado niile na ndekọ. Mee atụmatụ ị ga - aga n'ihu ugbu a ị mara ihe ndị na - asọmpi gị na - eme n'ụzọ kachasị mma maka ị ga - agbaso ya.
Nke a bụ akụkụ ikpeazụ kachasị mma nke ilekwasị anya gị iji kwụsị ịsọ asọ. Na ịmepụta àgwà mmapụta ngwaahịa na iji mgbatị kachasị mma bụ kpọmkwem ihe na-edugakarị ma ọ bụrụ na ọ dị mma ịchọta ịntanetị n'ebe ahụ. Nke a bụ otu ị ga - esi na - ebute ụzọ ahịa Amazon nke ndị na - ere ákwà buru ibu na - eme ka ndị kasị achọ ya na nchịkọta ngwaahịa gị, nkọwapụta, ihe nkwụpụta, wdg. M na - atụ aro ịnwale Jungle Scout ngwá ọrụ nke ga - azọpụta gị oge awa aka oru siri ike na nke di egwu. Nyochaa ndị na-ahụ maka mmemme ndị ọkachamara gị ma nweta mkparịta ụka dị mma na aro na nghọta bara uru banyere iji ogologo oge ọdụ chọpụta ụzọ kasị mma. Ị nwere ike ịchọta nke ọma ahịa Merchant Words ngwá ọrụ, nke a na-elekwasị anya kpọmkwem na ọchụchọ ọchụchọ Amazon, yana mpịakọta ọchụchọ kachasị elu na isiokwu ziri ezi nke ndị na-azụ ihe dị ndụ na-eji ebe ahụ.